CO2 emissions inoonekwa munzvimbo dzisina mvura dzinokanganisa kabhoni kutenderera | Green Renewables
CO2 emissions inoonekwa munzvimbo dzisina mvura dzinokanganisa kabhoni kutenderera
ChiGerman Portillo | | Tora co2, Environment
Mumakumi emakore apfuura, pane ongororo dzakawanda dzakatarisana nekuchinjana kwemagreenhouse gases pakati pemuchadenga neiyo biosphere. Pamagasi akanyanya kufundwa, aripo nguva dzose yekutanga CO2 sezvo iri iyo iri kuwedzera kuwanda kwayo zvakanyanya uye ichiwedzera tembiricha yepasi.
Chikamu chimwe chete muzvitatu chezvese zvinoburitswa neCO2 zvinokonzerwa nezviitwa zvevanhu zvinofinhwa nezvisikwa zvepasi. Semuenzaniso, masango, masango anogara achinaya, matondo uye zvimwe zvipenyu zvinonwisa CO2 inoburitswa nevanhu. Zvakare, kunyange zvingave zvisingaite senge, magwenga nematundra anoita futi.
1 Hukama pakati pemhepo uye yepasi pevhu kufefetedza
2 Iyo saiti yekuyedza muCabo de Gata
Hukama pakati pemhepo uye yepasi pevhu kufefetedza
Basa renzvimbo dzakawoma senge magwenga rave, kusvika nguva pfupi yadarika, risingatariswe nevesainzi pasiti kunyangwe paine zvidzidzo zvinoratidza izvozvo vane simba rakakura pachiyero chepasi rose kabhoni.
Chidzidzo chazvino chakaratidza kukosha kukuru kwekufefetera kwepasi pevhu kunokurudzirwa nemhepo, maitiro anowanzo kufuratirwa anosanganisira kuburitswa kwemhepo yakatakura CO2 kubva pasi pevhu kuenda mudenga kana ivhu raoma zvakanyanya, kunyanya muzhizha uye nemazuva ane mhepo .
Iyo saiti yekuyedza muCabo de Gata
Iyo nzvimbo yakaitwa izvo zviongorori iri semi-yakaoma spartal iri muCabo de Gata-Níjar Natural Park (Almería) umo vatsvagurudzo vakanyora data re CO2 kwemakore matanhatu (2009-2015).
Kusvika nguva pfupi yadarika, iko kudavirwa kwakawanda kwemasayendisiti kwaive kwekuti kabhoni chiyero cheesemi-yakaoma nzvimbo yezvinhu zvipenyu yakanga isina kwayakarerekera. Mune mamwe mazwi, huwandu hweCO2 iyo yakaburitswa nekufema kwemhuka nemiti zvakabhadharwa nefotosinthesisi. Zvisinei, chidzidzo ichi chinopedzisa icho Kune huwandu hwakawanda hweEC2 iyo inounganidzwa muvhu repasi uye kuti dzimwe nguva yemhepo ine simba inoburitswa mudenga, zvichikonzera kuwedzera CO2 emissions.
Ndosaka zvakakosha kuti uzive iyo CO2 kuburitswa kwenzvimbo dzakaoma masisitimu kuti unzwisise zvirinani pasirese CO2 chiyero.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Environment » CO2 emissions inoonekwa munzvimbo dzisina mvura dzinokanganisa kabhoni kutenderera
Simba remhepo munyika
Fujisawa ndiro guta rekutanga rakaringana uye rakazvimiririra muJapan